Google Earth / maps - Ikhasi 3 - Geofumadas
Ukusetyenziswa kunye neengcurio kwiGoogle Earth neGoogle Maps
Indlela yokufaka imifanekiso yendawo kwiGoogle Earth
Ukuphendula imibuzo ezayo kum, ndithatha ithuba lokushiya umphumo wokusetyenziswa koluntu. Ngexesha elidlulileyo ndathetha malunga nendlela ongayifaka ngayo imifanekiso exhunywe kwi-Google Earth point, nangona usebenzisa iidilesi zewebhu. Kulo mzekelo ndifuna ukubonisa usebenzisa indlela lendawo: Sazigqibela ukuba ifayile kwi C kwindawo /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png ngoko ...
I-Sevilla kwi-3D, phakathi kwezinto ezintsha zeGoogle Maps
I-Google idibanise into entsha ye-3D eya kuboniswa kwiGoogle Earth neGoogle Maps. Kwimizi ye-18 ihlaziywe, i-13 i-United States; becala ngasentshonalanga kunye 7 kubo e California: Foster City Redwood City Palo Alto Riverside San Diego Santa Cruz Sunnyvale The ezinye izixeko zezi: Honolulu (Hawaii) Las Vegas ...
Google umhlaba / imephu, ezintsha
Iinqununu zeGoogle Street View
I-9 Amehlo isayithi eqokelele imifanekiso yeCuriosities ye-Google Earth, ngokukodwa kwimibono yesitalato (I-Street View). Kumele uthathe ixesha lokukhangela izinto ezifana nalezi, kodwa hamba ukuba abanye bayibhale ingqalelo. Ngokuqhelekileyo izihloko zentshisekelo zala madoda zizilwanyana phambi kwekhamera, amantombazana ...
Google umhlaba / imephu, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ngethuba elidlulileyo ndenze uhlolo lwe-beta yeGeomap, ephakathi kweempawu zayo ezintle zikwazi ukuvumelanisa ukubukwa kwedatha kungekuphela kweGoogle Maps, kodwa kunye neBing Maps, Yahoo Maps kunye ne-Open Street Maps. Ngokungafaniyo nezinye iiprogram ezenzayo, ezithengisa kuphela ukuthunjwa kwe georeferenced, iGeomap ine ...
Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu
Kmzmaps, iimephu zeGoogle Earth ezibalabala
Kmzmaps yinkampani elungiselelwe ukuvelisa iimveliso zokuzoba kangangexesha elithile ngoku, utsalela ingqalelo ulwalathiso yanikwa umsebenzi wabo ngokwenza iimaphu ukuba lungaphengululwa Google Earth kunye zobu enomtsalane ukudlisa ixabiso lihle ngaphezulu nokusetyenziswa I-Google Earth kwiiklasi zeJografi ...
I-AutoCAD Course ye-Microstation Abasebenzisi
Le veki kuye imini yimpumelelo kakhulu, ndiye ebefundisa kwikhosi AutoCAD ukuba abasebenzisi MicroStation, ezifana mphandle bayaqhuba le khosi wayebanike kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo usebenzisa CivilCAD ukuba kwenziwe digital imodeli kunye contour imigca. Isizathu esona sizathu sokuba senze oko kukuba nangona ...
AutoCAD 2012 AutoDesk Bentley Systems KwiCACC
AutoCAD-AutoDesk, Ukufundisa i-CAD / GIS, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley
I-PlexEarth, Yintoni eyenza i-2.5 inguqu kwimifanekiso yeGoogle Earth
Ndiye ndacaciswa impawu ukuba i-version entsha ye-PlexEarth izisa, okulindeleke ukuba kwaziswe ngo-Oktobha we-2011. Isizathu esibalulekileyo sokuba esi sixhobo sinoko lwamkeleke kakhulu kukuba sisombulula oko iprogram eyaziwa kakhulu yeCAD (AutoCAD) kunye nehlabathi ayikwazi ukwenza ...
AutoCAD 2012 3D civil Umhlaba ka-Google PlexEarth
AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu, ezintsha
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sasincokola ukuvula indlela ifayile KML selekukho kwiiMephu zikaGuguli, esazi kwindlela yakho apho phi. Ngoku masibone oko kwenzeka ntoni ukuba sifuna ukubonisa ezininzi ngexesha elinye. 1 indlela KML Apha, ndiza kwenza ukubonisa ulwazi Regional Urban Information Centre (IUGR) umzekelo, ngokuzenzekelayo ...
Nangona kungumxholo wezinto ezininzi ezisisiseko, ngokuqhelekileyo kubonakala kwizintlu zokuhambisa kunye ne-Google imibuzo. Akumangalisi ukuba uyilo lwekhompyutheni luncedisa ixesha elide phantsi kweGrijine, i-Architecture kunye noKwakha ngelixa umxholo we-geospatial ube nolwalamano oluthe ngqo kwi ...
Dwg Umhlaba ka-Google
AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndathetha nge-georeferencing ye-Google Earth imifanekiso, usebenzisa i-kml njengenkcazelo xa ityula. Ukuvavanya iMaphu Yomhlaba Ndiyaqonda ukuba le nyathelo ingagwenywa xa silanda ifayile yokulinganisela ngexesha lokukhuphela umfanekiso, kwinkqubo sinokuyiguqula ...
Le isicelo engaphaya elula, kodwa practice elisombulula ukuba sonke sifuna ukuba kulula: Maps Google phesheya -----> Satellite Hybrid Layer Layer Layer Layer iimephu ngesimo le ecaleni kwenkqubo yam GISArcGIS Mapinfo GeoMedia Microstation Bentley Imephu Ukuze ...
ArcView Umhlaba ka-Google
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley
Ngenisa imifanekiso kunye ne-model 3D kwi-Google Earth
I-Microstation, kwi-8.9 version (XM) izisa uchungechunge lwemisebenzi yokusebenzisana ne-Google Earth. Kule meko ndifuna ukubhekisela kwimveliso yesithathu imifanekiso kunye nomfanekiso wayo, into efana neyo-AutoCAD Civil 3D. Le mi sebenzi isebenze ngokwenzayo: Izixhobo> indawo okanye kwindawo yeMicrostation ...
Dgn Umhlaba ka-Google PlexEarth
Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley, Topography
Google Earth; mappers yimifanekiso
I-Google Earth, ngaphandle kokuba isixhobo sokuzonwabisa kuluntu jikelele, isiye isixhaswa ngokubonakalayo kwiprographic, kokubili ukubonisa iziphumo nokujonga ukuba umsebenzi owenziwayo uhambelana; ungathethi njengethuluzi lokufundisa nge-geography okanye kwiiklasi ze-geodesy. Kule meko, ndi ...
UTM idibanisa kwiimephu zeGoogle
I-Google mhlawumbi iyithuluzi esihlala kuyo malunga neveki, ngokungacingi ukuba yonke imihla. Nangona isicelo sisetyenziswe ngokubanzi ukuhamba kunye nokuhamba ngeedesi, akulula kakhulu ukujonga iinqununu zeengongoma ezithile, okanye kwifomathi yeendawo, u-UTM ungaphantsi kolawulo kwiimephu zeGoogle. Eli nqaku, ngaphandle kokukufundisa ...
Iiphotography, Okufumaneka, Google umhlaba / imephu, ezintsha
Best of Zonum for CAD / GIS
I-Zonum Solutions yiziko elibonelela izixhobo eziphuhliswe ngumfundi kwiYunivesithi yaseArizona, oye wazinikezela ngexesha lokungena kwiinkcukacha ze-CAD, imephu kunye nobunjineli, ngakumbi iifayile ze-kml. Mhlawumbi oko kwakunomdla wokuba bekunikwa ngokukhululeka, kwaye ukuba ...
Iiphotography, Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo, Zobunjineli
Imizuzu, iingxaki eziqhelekileyo
I-Stitchmaps ibe yenye yezona zicelo eziphambili ezenziwe ukuba zenze i-orthophotos kwiimifanekiso ezifakwe kwiGoogle Earth, ngendlela esebenza ngayo kwaye ndathetha ixesha elidlulileyo. Ngubani owenze inkqubo ngaphambili, ngeenyawo, ukukhuphela iifoto-skrini zeGoogle uze udibanise ne-PhotoShop okanye iBentley Descartes, siyazi ukuba iStchmaps yenza okungaphezulu. ...
Ungazi njani xa iGoogle ihlaziya imifanekiso yendawo
Sonke siyakuthanda ukwazi xa umda wolomdla ufumana ukuhlaziywa okutsha kwiGoogle Earth. Bazazi updates Google yenza base yayo imifanekiso intsonkothile, ilumkisa njani LatLong kakhulu luyathandabuzeka, yaye nangona ezipapashwe kutshanje iifayile KML kunye geometries okuyo ...
Ukunaba Urban, isihloko 2011
Inkomfa yezemimandla iya kuba yinkwenkwelo kulo nyaka - kwaye ezi zilandelayo - kuba akukho nto enokuyenza ukulungisa izisombululo kwihlabathi jikelele. Ugxininiso lwalo nyaka kwiSizwe-Geographics ngokuchanekileyo kubemi behlabathi ngokuhlwayela i-7 billion. Inkqubo yeJanuwari yintlanganiso yeklasi. I ...
ArcView Umhlaba ka-Google KML shp
Iiphotography, Google umhlaba / imephu, ezintsha
Ikhasi langaphambili Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 ... Page 13 kwiphepha elilandelayo